I-17 yezifundo zebhayibhile zasimahla ezikwi-Intanethi ezinesiqinisekiso sokugqitywa
Disemba 15, 2021 Chima Godswill
Kule nqaku, uyakufumana uluhlu malunga neekhosi ezili-17 ezahlukeneyo zasimahla kwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa ezinokukhutshelwa zize ziprintwe okanye zifunyenwe njengekopi ethambileyo nge-imeyile ukuze zisetyenziswe naphina.
Oku kuvakala kufanelekile ukuba kuyinyani, huh? Ngoku mandibuze, Yeyiphi enye indlela ebhetele yokuhlala uhambelana nezithembiso zikabawo wasezulwini kunokuba ube nokufikelela kwilizwi lakhe, ufunde imigaqo-nkqubo yebhayibhile eqhubele phambili naphina apho sikhona, sinento encinci njengokukhangela kwi-intanethi?
Asizukufumana kuphela ukufikelela ekufundeni ezi mfundiso zeBhayibhile, kodwa siya kufunda ukubonisa abanye indlela yobukumkani ngeemfundiso esizifumeneyo.
Eli nqaku lenzelwe ukufikelela kwizifundo zasimahla zebhayibhile njengoko sikholelwa ukuba "… samkele simahla, siya kunika ngesisa."
Into enomdla kukuba uya kuba nakho ukukhuphela isatifikethi oza kusinikwa emva kokuba uthathe ezi zifundo okanye uthathe isigqibo sokusifumana nge-imeyile.
Thatha ixesha lakho lokufunda eli nqaku. Okwangoku, nantsi itafile yomxholo wesishwankathelo sento onokuyilindela kweli nqaku.
1 Kutheni ukhetha iKhosi zebhayibhile zasimahla kwi-Intanethi?
2 Iikhosi zasimahla ze-Intanethi zeBhayibhile ezinesiqinisekiso sokuGqibela
2.1 Iinkokeli zamaKristu iikholeji zasimahla kwiikhosi zebhayibhile ezikwi-intanethi
2.2 Isikolo saseyunivesithi yaseBiola iTalbot kwisikolo se-theology-Master of Arts
2.3 ISatifikethi sokuxolisa kumaKristu
2.4 INYATHELO Ikhosi ye-Intanethi yeBhayibhile
2.5 Iikhosi zeChristian Leadership
2.6 Izifundo zonqulo zaseyunivesithi yaseYale
2.7 School Bible School
2.8 Izifundo zobuJuda
2.9 Inkululeko yaseyunivesithi kwizifundo zebhayibhile ezikwi-intanethi
2.10 Iikhosi zeGrace zamaDyunivesithi asimahla kwiKholeji yeBhayibhile eneZatifikethi
2.11 UZiqu zintathu kwiBhayibhile
2.12 I-BA yeYunivesithi yaseHouston Baptist kwiZifundo zeBhayibhile
2.13 IVangeli ebonakaliswe yiYunivesithi yaseAletheia Logos
2.14 IYunivesithi yaseCalifornia – Irvine's UCI ivule inkqubo yezifundo zebhayibhile
2.15 Umzantsi-mpuma weBhaptizi iTheological Seminary kwiKhosi yeBhayibhile ekwi-Intanethi
2.16 Gordon – Conwell Theology Seminary Simahla yeKhosi yeBhayibhile ekwi-Intanethi
2.17 Ithemba leLambchow leBhayibhile ngeZifundo zasimahla kwi-Intanethi
2.18 Izatifikethi ezi-3 zoBufundisi zasimahla kwi-Intanethi
2.18.1 1. Isiqinisekiso soBulungiseleli boBufundisi
2.18.2 2. UQeqesho lwaSimahla loBufundisi kwi-Intanethi
2.18.3 3. Isiqinisekiso soBulungiseleli boBufundisi
2.20 I ngcebiso
Kutheni ukhetha iKhosi zebhayibhile zasimahla kwi-Intanethi?
Enye inokukhokelwa ngandlela-thile okanye enye ukuba ibuze imibuzo enje ngokuba kutheni ufuna ukufunda kwi-Intanethi kwaphela. Ukukhetha iikhosi zasimahla ezikwi-intanethi kuya kunceda ukukhula kwakho ngokomoya.
Njengokuba kunjalo, uninzi lwabantu lukhetha iikhosi zasimahla ze-Intanethi ezikwi-Intanethi kuba zininzi kakhulu kwitafile yabo engabavumeli ixesha leeklasi eziqhelekileyo.
Ezi zifundo ze-Intanethi zibanika elo thuba lokukhula kwizinto zikaThixo ngaphandle kokuphazamisa ishedyuli yomsebenzi wabo.
Iikhosi zasimahla ze-Intanethi zeBhayibhile ezinesiqinisekiso sokuGqibela
Ukuqala uhambo lwakho lokuqhubela phambili ubomi bakho bokomoya, nazi iikhosi zasimahla ze-17 ze-Intanethi ezikwisatifikethi sokugqitywa onokuthi usebenzise kuso.
Iikhosi zeenkokeli zamaKristu iikhosi zekholeji
Isikolo saseyunivesithi yaseBiola iTalbot kwisikolo se-theology-Master of Arts
ISatifikethi sokuxolisa kumaKristu
INYATHELO Ikhosi ye-Intanethi yeBhayibhile
Iikhosi zeChristian Leadership
Izifundo zonqulo zaseyunivesithi yaseYale
Inkululeko yaseyunivesithi kwizifundo zebhayibhile ezikwi-intanethi
UGrace Christian University
UZiqu zintathu kwiBhayibhile
I-BA yeYunivesithi yaseHouston Baptist kwiZifundo zeBhayibhile
IVangeli ebonakaliswe yiYunivesithi yaseAletheia Logos
Inkqubo evulekileyo yeYunivesithi yaseCalifornia-Irvine ye-UCI
Umzantsi-mpuma weBhaptizi yeTekhnoloji yeZiko leMfundo
Isikolo Semfundo sikaGordon – Conwell
Ithemba leLambchow's Study Study
Ukuqala uhambo lwakho lokuqhubela phambili nobomi bakho bokomoya, nazi iikhosi zasimahla ze-17 ze-Intanethi ezikwi-intanethi ezinesiqinisekiso sokugqitywa
Iinkokeli zamaKristu iikholeji zasimahla kwiikhosi zebhayibhile ezikwi-intanethi
The Iikholeji zeenkokeli zamaKristu iqhuba iwebhusayithi apho abafundi banokubhalisa kwaye bathathe izifundo zasimahla zebhayibhile ezikwi-intanethi, iziqinisekiso zekholeji yenkonzo, njl.njl kunye nesitifiketi esifanelekileyo ekupheleni kwenkqubo.
Iikholeji zeenkokeli zamaKristu zazikho, ngo-Novemba ngo-2019, zamkelwa kwi-ABHE yemeko yokufaka isicelo yokuvunywa eyamkelwa liSebe leMfundo lase-United States.
Xa ugqibile, ufumana isatifikethi sokugqitywa.
Ukwazi ngakumbi ngale khosi ekwi-intanethi, ndwendwela iwebhusayithi yeCLC.
IYunivesithi yaseBiola Talbot isikolo semfundo ubonelela ngezifundo zasimahla zebhayibhile ezikwi-Intanethi ngesatifikethi seMasters sobugcisa esiya kukuxhobisa ngezifundo nangokomoya ukufezekisa ubizo lwakho ngaphandle kokufuna ukunqumama kubizo lwakho lwangoku okanye kwinkonzo.
Uphengululo lubonisa ukuba isifundo kwi-Intanethi nakwi-intanethi zinzima ngendlela ekunokwenzeka ngayo, kwaye zinika ulwaneliseko kubafundi.
IYunivesithi yaseBiola iTalbot School of Theology ikwabonelela ngesifundo se-intanethi simahla nesatifikethi esisemthethweni kwinkqubo yobuKristu yokuxolisa ethi inezifundo ezithathu ezineentetho ezizodwa ezisibhozo zekhosi nganye, amanqaku ekhosi kunye nemibuzo yesatifikethi. Oku kukuvumela ukuba uhambe ngokukhawuleza ngelixa ufunda.
nqakraza apha ukubhalisa.
Le khosi ibonelelwa yiYunivesithi yaseTrace Dame Isibonelelo seMcGrath sobomi beChruch Leyo yenzelwe ukomeleza ukuqonda kwakho ngento ayilindeleyo kuwe uThixo, kunye nokuqonda kwakho ngoThixo.
IINYATHELO iikhosi ze-intanethi zilungele iikatekista, ootitshala besikolo, abafundisi, amadikoni, kunye namanye amaKatolika amadala afuna ukufunda umgama ongqongqo ngengqondo nothembekileyo kwinkcubeko yamaKatolika.
nqakraza apha ukubhalisa
Iikhosi zeNkokeli zamaKristu ziziSiseko seziQinisekiso zamaBhaso asimahla, iziqinisekiso zeekholeji zexabiso eliphantsi kunye neKholeji yeeNkokeli zamaKristu, okanye ukumiselwa kunye ne-Christian Leaders Alliance.
Zikwaxhaswa ziinkokheli zobuKristu, iziseko, kunye neecawe kuyo yonke indawo ekubona kubalulekile ukunika eli thuba kubantu abaninzi kangangoko. Injongo kukuba iinkokeli zamaKristu zinokufunda kwaye zingabotshwanga ngamatyala akhubazekileyo.
IZiko lineekhosi ezili-100 kunye nezifundo ezifumanekayo zokuthatha iiNkonzo zobuChristian. I-CLI inezifundo ezininzi ezikhoyo ezinje ngeTheology, uPhando lweTestamente eNdala, ukutolikwa kwebhayibhile, Ubulungiseleli boQeqesho boBomi, iShishini kunye neShishini, umthandazo, iNkonzo yoLutsha, uBufundi, iMfundo ngokuBanzi, ifilosofi,, kunye neekhosi ezininzi ezilingana nobizo lwakho.
nqakraza apha ukuze ubhalise
ISebe leYunivesithi yaseYale lezeNkolo libonelela ngamathuba ophononongo lobuchwephesha beenkcubeko kunye noqeqesho.
Kwinqanaba lesidanga sokuqala, iSebe libonelela ngezifundo ezibanzi ezibandakanya iinkolo eziphambili zehlabathi, kugxininiswa kakhulu kwimbali nakwizithethe zabo zobukrelekrele.
Kwinqanaba lokuthweswa izidanga, iSebe lihlelwe ngokwamacandelo alishumi: iMbali yeNkolo yaseMelika, ubuKristu bamandulo, iNkolo zaseAsia, iZifundo zamaSilamsi, iZifundo zamaJuda, iTestamente eNtsha, iTestamente eNdala / iBhayibhile yesiHebhere, ifilosofi yeNkolo, iNkcubeko yeNkcubeko, kunye neTheology.
Nantsi ikhonkco kwintshayelelo ye- itestamente entsha Kwaye enye kwi iTestamente yakudala.
Ukufunda eBhayibhileni kufanele kube mnandi, kungabi luxanduva. Akukho mida yexesha kwaye akukho shedyuli, ngoko zive ukhululekile ukuthatha izifundo njengoko unexesha. Funda kwiwebhusayithi, nge-imeyile, okanye ngeposi.
Veki nganye, amawakawaka abantu asebenzisa iwebhusayithi yeSikolo seBhayibhile seHlabathi ukufunda kwilizwi likaThixo.
Into enomdla kukuba iSikolo seBhayibhile seHlabathi sinikezela ngezifundo ezahlukeneyo kunye nezifundo ezifutshane kubantu abanomdla wokufunda iBhayibhile.
nqakraza apha ukwazi okungakumbi
Ngelixa ingezizo ezobuchwephesha, iwebhusayithi ye-Judaism 101 sisingeniso esifanelekileyo kubantu abafuna ukufunda ngakumbi malunga nokuba kuthetha ukuthini ukuba ngumJuda.
Iphepha ngalinye lesiza se-encyclopedia libhalwe ukunceda abafundi ukuba bakhethe ukufunda ulwazi ngokusekwe kwinqanaba labo lokuqheleka.
Amaphepha 'eeNtlanga' enzelwe abo bangengomaYuda, amaphepha 'eSiseko' aqukethe ulwazi ekufuneka bonke abantu abangamaJuda bazi, kwaye amaphepha 'aPhakathi' kunye 'aPhambili' anika abafundi ukuba bajonge inkolo yamaJuda.
Oku kunika umbono kwindlela ezisebenza ngayo ezinye zeetestamente ezindala.
Cofa apha ukwazi okungakumbi
IYunivesithi yaseLiberty ikwi-Intanethi ISatifikethi seBakala lesiGqeba kwiZifundo zeBhayibhile lukhetho oluhle kakhulu kubafundi abafuna amathuba amatsha enkonzo okanye abanqwenela ukwandisa ukuqonda kwabo iBhayibhile.
Kwimizuzu emi-2 encinci, unokufumana ulwazi olufunekayo kubuvangeli, kwithiology, nakwizifundo ezinzulu zebhayibhile.
Cofa apha ukuze ufunde
Nantsi i Uluhlu lwezifundo zasimahla kwi-Intanethi unokuba nomdla kwi.
Iikhosi zeGrace zamaDyunivesithi asimahla kwiKholeji yeBhayibhile eneZatifikethi
IGrace Christian University ibonelela ngezifundo zasimahla zebhayibhile ezikwi-intanethi ezinezatifikethi. Banikezela ngokudibana, isidanga kunye needigri zemasters ezikwi-Intanethi ngokupheleleyo kwaye ziyafumaneka kubantu abadala.
I-Grace Christian University ibonelela ngenkqubo ngokuqonda ukuba baninzi abantu abanomdla wokulandela ubizo lwabo kwaye kufuneka balungiselele loo msebenzi ukhethekileyo, kodwa babanjwa yimfuno yokulinganisa usapho, ikhondo lomsebenzi, imali kunye nokholo.
Cofa apha ukuze ufumane okungakumbi.
IYunivesithi yaseZiqu-zintathu ibonelela ngenkqubo yebhayibhile kubuKrestu. Iyunivesithi ifuna ukuba ukhethe imo yokuhanjiswa kwe-intanethi kwinkcazo yekhosi.
nqakraza apha ukwazi okungakumbi.
Le nkqubo yenzelwe abo bafuna ulwazi olunzulu malunga nale nto iBhayibhile ithetha ngayo.
Eli nqanaba lifaneleke ngakumbi kwabo bafuna ukukhonza umzimba kaKristu ekufundiseni nasekushumayeleni iindima njengomlungiseleli ecaweni, umvangeli wasemazweni, kwinkonzo yecawa yecawa, okanye nakweyiphi na imeko apho uThixo abiza khona.
Cofa ukuze wazi ngakumbi
Kuyo yonke ikhosi, iklasi ibhengeza ubulumko obuvela kwibhayibhile emva koko ibuchaze ngendlela yanamhlanje.
Ngokwenza njalo, abafundi bafumana ukuqonda kwiBhayibhile kunye nevangeli njengoko befunda indlela yokucinga ngezihloko ngeliso elibukhali.
IYunivesithi yaseCalifornia – Irvine's UCI ivule inkqubo yezifundo zebhayibhile
I-Anthropology 135A: Inkolo kunye neNtlalo yoLuntu ijolise kwindima yenkolo eluntwini.
Ngothotho lweentetho zePowerPoint, abafundi bavavanya indlela inkolo ethe yaluchaphazela ngayo uluntu ngobugcisa, ezopolitiko kunye nenkcubeko edumileyo.
Funda kwakhona: Iikhosi zamahhala kwi-intanethi eHarvard
Umzantsi-mpuma weBhaptizi iTheological Seminary kwiKhosi yeBhayibhile ekwi-Intanethi
IChristian Theology igubungela iziseko zeenkolelo zobuKristu ngokujonga oko kufundiswa yiBhayibhile kunye nokuba kutheni imfundiso yenkolo evakalayo ibalulekile.
Le khosi iya kukhuthaza ukukhula kwakho ngelixa uxhobisa ukuba ufundise abanye malunga neenkolelo zobuKristu.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi
Gordon – Conwell Theology Seminary Simahla yeKhosi yeBhayibhile ekwi-Intanethi
Iiklasi kunye nenkqubo zisimahla, kwaye ziyafumaneka kwi-Intanethi ngeZiko i-Ockenga.
Kukho iindlela ezininzi apha kubafundi kunye neengcali. Abafundi banokukhetha ukujonga ngokubanzi ubume behlabathi, okanye baphonononge kuthotho lweTestamente eNtsha, iTestamente eNdala, okanye imbali yecawa.
Kukho uthotho oluneenxalenye ezimbini kwithiology.
Cofa apha ukuze uthole ezinye
Ithemba leLambchow leBhayibhile ngeZifundo zasimahla kwi-Intanethi
Esi sesinye isikolo esinikezela ngezifundo zasimahla kwi-Intanethi ezinezatifikethi.
Inkqubo yokufunda ibhayibhile inethemba lokuqeqesha abantu ngendlela yokucinga kunye nethemba elingaphaya kwemida yokucinga. Isimahla.
Related: Bona iikhosi ezingama-300 + eziSimahla ngokuBanzi ezineziqinisekiso zokuqalisa ngoku.
Izatifikethi ezi-3 zoBufundisi zasimahla kwi-Intanethi
Unokufumana izatifikethi zasimahla zokufundisa kwi-Intanethi ukuphuhlisa izakhono zakho zobulungiseleli kwaye ezi zatifikethi zixoxwe ngezantsi ziya kunceda kuhambo lwakho.
1. Isiqinisekiso soBulungiseleli boBufundisi
Esi sesinye sezatifikethi zasimahla zokufundisa ezikwi-intanethi ezibonelelwa yi-Axx Global. Inkqubo ijolise ekuphuhliseni nasekukhuliseni isakhono sakho sobunkokeli ukuqhubela phambili ubulungiseleli bakho. Isiqinisekiso sijolise ngakumbi kubafundisi kunye neenkokeli ezihlala kumazwe ahlwempuzekileyo okanye kumazwe atshutshiswayo.
ISiqinisekiso soBulungiseleli boBufundisi sinezifundo ezisi-8, izifundo ezili-143, kunye neeyure ezingama-30.5 zevidiyo efunekayo.
2. UQeqesho lwaSimahla loBufundisi kwi-Intanethi
UQeqesho lwaSimahla loBufundisi kwi-Intanethi yinkqubo ebonelelwa liZiko leeNkokeli zamaKristu kwaye yenzelwe abo bafuna ukulandela imisebenzi yobulungiseleli. Nokuba sele ungumfundisi okanye unqwenela ukuba ngomnye, le nkqubo yenzelwe ukuqeqesha, ukuphuhlisa, kunye nokukuxhobisa ngezakhono eziyimfuneko ukuze wenze imisebenzi yakho yokwalusa.
3. Isiqinisekiso soBulungiseleli boBufundisi
Esi sesinye sezatifikethi zasimahla zokufundisa ezikwi-Intanethi ezibonelelwa yiLexington Theological Seminary kwaye yenzelwe abafundi abangabafuniyo isidanga. Abafundi abanesidanga se-bachelor banokuthatha ikhosi nokuba yeyokufunda ngetyala okanye hayi ngetyala. Ikhosi ineekhosi ezili-10 kwaye igqitywe ngeeyure ezingama-24.
Ukuza kuthi ga ngoku kwihlabathi liqhubeka nokuhamba, iikhosi ezinikezela ukufundisa nokwakha amaKristu kwihlabathi liphela ziya kuqhubeka ukuvela.
Esi sisiqalo nje. Ukukhangela kwi-intanethi kutyhila okuninzi ngakumbi. Thatha ixesha lakho ukutyelela ngokwenyani iisayithi ukuqala izifundo zakho zasimahla kwi-Intanethi ngoku ufumane isatifikethi esisemthethweni ekugqibeleni.
funda kwi-intanethi Iikhosi ze-Intanethi
Izifundo zasimahla ezikwi-intanethi ezinezatifikethiizifundo zekhompyutha
Post Previous:Ngaba uyafuna ukufunda e-UK ngenkcitho encinci? Nantsi Indlela
Okulandelayo Post:IiNdawo ezili-10 eziKhuselekileyo zokufundela kwelinye ilizwe
Pingback: Amanyathelo ama-5 okufumana iOnline kwi-Intanethi ukuba yenze iMitshato 2022
UJohn OReilly ll uthi:
January 11, 2021 kwi 7: 44 am
Ndiyathemba ukuba ndiza kufunda kwabanye malunga nokuphazamisa isiBhalo esixutywe nesam. Ndiyazi ukuba uMoya oyiNgcwele usikhokelela sonke ekuqondeni, kodwa, ndiyaqonda ukuba angandifundisa abanye. Ndifuna nje ilungile kwaye inyani. Ndiyakuthanda ukufunda iBhayibhile, indifundisa mihla le. Enkosi kwaye UTHIXO akusikelele ..
January 11, 2021 apha 9: 40 pm
Enkosi noThixo akusikelele.
U-Lun Ngai uthi:
Disemba 26, 2020 kwi-4: 46 pm
Ndingathanda ukufunda nzulu ngebhayibhile kuba ndiyathanda ukwabelana ngeendaba ezilungileyo kwabanye.
January 11, 2021 apha 9: 41 pm
Kuyinto entle ukuyenza.